မြန်မာကျောင်းဆရာများ: October 2009
ထိုင်းနိုင်ငံ မဲဆောက်မြို့ ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများ၏ ပညာရေးဆောင်းပါး
တနင်္လာနေ့၊ စက်တင်ဘာလ 21 ရက် 2009 ခုနှစ် 18 နာရီ 52 မိနစ်
ဒီဆောင်းပါးမှာ မြန်မာနိုင်ငံကနေ ထိုင်းနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်း နယ်စပ်မြို့ မဲဆောက်ဆီ ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်လာသူ မြန်မာနိုင်ငံသား တွေရဲ့ ပညာရေးအတွက် အစိုးရမဟုတ်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေက ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ စာသင်ကျောင်းတွေနဲ့ ဆက်စပ်တဲ့ အကြောင်း အရာတွေကို တင်ပြသွားပါမယ်။
၁၉၉၅ ခုနှစ်က မြန်မာနိုင်ငံကနေ ထိုင်းနိုင်ငံ မဲဆောက်မြို့ဆီ ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်လာသူတွေနဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံသားအဖြစ် သက်သေ အထောက်အထား မရှိသူတွေအတွက် ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ စာသင်ကျောင်း ၂ ကျောင်းပဲ ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီတုန်းက ကျောင်းသား ကျောင်းသူရော၊ ဆရာ ဆရာမတွေပါ ထိုင်းရဲတွေရဲ့ မကြာခဏ ဖမ်းဆီးမှုတွေ၊ ခြိမ်းခြောက်မှုတွေ ရှိခဲ့တာပါ။ မဲဆောက်မြို့ရှိ မြန်မာရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူတွေကို ပညာသင်ကြားပို့ချပေးရေးမှာ ပြဿနာပေါင်းစုံ၊ အခက်အခဲပေါင်းစုံနဲ့ ရင်ဆိုင်ခဲ့ကြရပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ၁၉၉၇ ခုနှစ်မှာ ထိုင်းနိုင်ငံ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို အကြီးအကျယ် ပြင်ဆင်ခဲ့ပြီးနောက် ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်း ပညာရေး ဆိုင်ရာ ဥပဒေတွေလည်း အပြောင်းအလဲတွေ ရှိခဲ့ပါတယ်။ တိုးတက်ကောင်းမွန်လာအောင် ပြုပြင်ခဲ့တဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံ ပညာရေး စနစ်မှာ “National Education Act : An Education Reform Act for Future Development of the Thai People” အရ ပညာရေးဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်း၊ ဥပဒေသစ်တွေကို ထုတ်ပြန်ခဲ့သလို၊ ပညာရေးကို နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ အဓိက မဏ္ဍိုင်အဖြစ် အလေးအနက် အားပေးမှုတွေ ပြုလုပ်လာခဲ့တာ တွေ့ရပါတယ်။ ၁၉၉၇ ခုနှစ်မှာ ပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံ ဖွဲ့စည်းပုံအသစ်မှာ ပညာရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ဥပဒေသစ်တခုကိုလည်း အတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းခဲ့တာ ထူးဆန်းစွာ တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒီ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ဥပဒေသစ်အရ ထိုင်းနိုင်ငံ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင် အရွေးခံကြမယ့် သူတွေဟာ အနည်းဆုံး အဆင့်မြင့် ပညာဘွဲ့ရရှိသူ ဖြစ်ရမယ်လို့ ပြဋ္ဌာန်းထားတာပါ။
အဲဒီ ဥပဒေသစ်ကို ထိုင်း ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေမှာ အခုလို ထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ “The proportional representation party list system was aimed at deterring vote-buying, strengthening the party system, and increasing the quality of candidates. MPs were required to haveabachelor's degree. In order to prevent last-minute party switching, MPs were required to be registered members of political parties at least 90 days before the election date. An independent Election Commission was established. Votes for House elections were counted atacentral site in each province rather than at each polling station. This reform made it more difficult for village canvassers to evaluate the effectiveness of vote buying.”
ဒီရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ဥပဒေသစ်ဟာ “ဆိုက်ကားသမား၊ တရားသူကြီး မလုပ်သင့်” ဆိုတဲ့ အချက်ကို ဆိုလိုထားတာကြောင့် တကယ်ပဲ ဖြစ်သင့်တဲ့ အချက်၊ နမူနာယူသင့်တဲ့ အချက်လို့ ကျနော် ထင်တယ်။ အဲဒီ ပြဋ္ဌာန်းခဲ့တဲ့ ဥပဒေသစ်နဲ့အတူ ထိုင်း ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနက ထိုင်းနိုင်ငံ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင် အရွေးခံကြမယ့် အဆင့်မြင့် ပညာဘွဲ့ မရသေးတဲ့ သူတွေအတွက် အထူး စာသင်ကျောင်းတွေ၊ အဆင့်မြင့် တက္ကသိုလ် ပညာရေးအတွက် ညနေကျောင်းတွေကို ဖွင့်လှစ်ပေး ခဲ့ပါတယ်။ ပညာရေးနဲ့ နိုင်ငံရဲ့ လုံခြုံရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့ကို အဓိကထား တည်ဆောက်သွားနိုင်ဖို့ ရည်ရွယ်ခဲ့တာပါ။
ဥပဒေသစ်ကို ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေမှာ ထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းခဲ့ရာမှာ ပညာရှင်တွေနဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီတွေအကြား ကနဦးမှာ အခြေအတင် ဆွေးနွေးမှုတွေ ရှိခဲ့ပေမယ့်လည်း နောက်ဆုံးမှာ ထိုင်းပြည်သူတွေရဲ့ ထောက်ခံမှု အပြည့်အဝ ရခဲ့ပါတယ်။ နိုင်ငံ တကာ လွှတ်တော်အမတ်တွေနဲ့ အစဉ်အမြဲ ထိတွေ့ဆက်ဆံနေကြတဲ့ ထိုင်းလွှတ်တော်အမတ်တွေကလည်း သဘောတူ ထောက်ခံ ခဲ့ကြသလို၊ ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်း ပညာရေး ပြဿနာတွေ၊ အခက်အခဲတွေကို ထိုင်းပါလီမန်မှာ အလေးအနက်ထား ဆွေးနွေး လာခဲ့ကြတယ်။
၁၉၉၇ ခုနှစ် နောက်ပိုင်းမှာ ထိုင်းအစိုးရနဲ့ ထိုင်းဘုရင်တို့ရဲ့ ထိုင်းပညာရေးကို အားပေးလုပ်ဆောင်ခဲ့မှုကြောင့် ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်း နေထိုင်ကြတဲ့ ဘယ်လိုကလေးငယ်မဆို ပညာသင်ကြားခွင့် ရှိလာစေခဲ့ပါတယ်။ ဒီအချက်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံကနေ ထိုင်းနိုင်ငံထဲကို ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူတွေရဲ့ ပညာရေးကို လမ်းကြောင်းပွင့်လာစေခဲ့တယ်။ ဒါ့အပြင် မဲဆောက်မြို့ မြန်မာနိုင်ငံသား ပညာရေး တာဝန်ခံတွေ၊ စေတနာအလျောက် လာရောက်ထမ်းဆောင်ပေးနေကြတဲ့ ကျောင်းဆရာ ဆရာမတွေရဲ့ အစဉ်တစိုက် ကြိုးပမ်းခဲ့မှု တွေကြောင့် ၁၉၉၇ ခုနှစ်မှာ ထိုင်းနိုင်ငံ မဲဆောက်မြို့မှာ မြန်မာရွှေ့ပြောင်း နေထိုင်သူတွေအတွက် စာသင်ကျောင်း ၉ ကျောင်း ဖြစ်လာခဲ့တယ်။
မြန်မာနိုင်ငံ နအဖ စစ်အုပ်စုရဲ့ အုပ်ချုပ်မှုသက်တမ်း ရှည်လာလေ၊ ဆင်းရဲမွဲတေမှုအောက်မှာ နေထိုင်နေကြရတဲ့ မြန်မာ နိုင်ငံသား ဦးရေတွေ တိုးလာလေမို့၊ ထိုင်းနိုင်ငံထဲကို ရွှေ့ပြောင်းလာရောက်လုပ်ကိုင်သူ မြန်မာနိုင်ငံသား ဦးရေဟာလည်း တနေ့ တခြား တိုးလာခဲ့တယ်။ လက်ရှိ ထိုင်းနိုင်ငံထဲမှာ နိုင်ငံရေးဒုက္ခသည်တွေ သိန်းချီ ရှိနေသလို၊ စီးပွားရေးအရ ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်လုပ်ကြသူတွေလည်း ၄ သန်းလောက် ရှိနေပါတယ်။ ဒီလိုပါပဲ၊ ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူတွေအတွက် စာသင်ကျောင်းတွေ ဟာလည်း တနှစ်ထက်တနှစ် ပိုများလာပါတယ်။
၂၀၀၅ ခုနှစ်နောက်ပိုင်း ထိုင်းနိုင်ငံ မဲဆောက်မြို့မှာ မြန်မာရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားတွေအတွက် စာသင်ကျောင်း ၆၇ ကျောင်း ရှိနေပါပြီ။ လက်ရှိ ပညာသင်ကြားနေသူ ကျောင်းသူ ကျောင်းသား ၁ဝ,ဝဝဝ ကျော်ရှိပြီး၊ ဆရာ ဆရာမ ၅ဝဝ ကျော်က ပညာသင်ကြား ပို့ချပေးနေကြပါတယ်။ မဲဆောက်မြို့ မြန်မာရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူတွေရဲ့ ပညာရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လေ့လာ သုတေသနလုပ်နေတဲ့ ထိုင်းပညာရေးဌာနနဲ့ အစိုးရမဟုတ်တဲ့ ပညာရေး အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ အစီရင်ခံစာအရ ထိုင်းနိုင်ငံ မဲဆောက်မြို့နဲ့ တပ်ခ်ခရိုင် အနီးတဝိုက်မှာ မြန်မာရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူ ကလေးငယ် ၂ဝ,ဝဝဝ ကျော်ဟာ ကျောင်းမတက် နိုင်သေးကြောင်းနဲ့ ကလေးငယ်ပေါင်း ၄ဝဝဝ ကျော်ကတော့ မဲဆောက် ထိုင်းစာသင်ကျောင်းတွေမှာ ပညာသင်ကြားနေကြောင်း သိရပါတယ်။
လာမယ့်နှစ် အနည်းငယ်မှာတော့ ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် မဲဆောက်မြို့အနီးရှိ အုံးဖျံဒေသ အနီးတဝိုက်မှာ မြန်မာရွှေ့ပြောင်း နေထိုင်သူတွေ အဆင့်မြင့် ပညာသင်ကြားနိုင်ဖို့ ထိုင်းဘုရင်မိသားစုနဲ့ ထိုင်းပညာရေးဌာနတို့ ပူးပေါင်းပြီး တက္ကသိုလ်ကျောင်းတခုကို ကမကထ ကူညီဖွင့်လှစ်ပေးမယ်လို့ ဝမ်းသာစရာသတင်း ကြားခဲ့ရတယ်။ တကယ် ဒီသတင်းအတိုင်း ဖြစ်လာခဲ့မယ်ဆိုရင် အုံးဖျံ ဒေသ အနီးတဝိုက် ကီလိုမီတာ ၂ဝဝ အဝန်းရှိ မြန်မာရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူတွေ အဆင့်မြင့်ပညာကို လာရောက်ဆည်းပူးခွင့် ရရှိနိုင်မယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
တနှစ်ပြီးတနှစ် မဲဆောက်မြို့ မြန်မာရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူဦးရေ တိုးတက်များပြားလာနေသလို၊ ကလေးငယ်တွေရဲ့ အနာဂတ် ပညာရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အခက်အခဲတွေဟာလည်း ပိုမိုရင်ဆိုင်ကြရပါလိမ့်မယ်။ နောင် ၅ နှစ်တာ ကာလအတွင်း အဓိက ရင်ဆိုင်ရမယ့် အခက်အခဲတွေကတော့ -
(၁) ကျောင်းတွေ ဆက်လက်ဖွင့်လှစ်နိုင်ဖို့၊ ဆက်လက်ရပ်တည်ဖို့ ငွေကြေးဆိုင်ရာ အခက်အခဲတွေ ရှိတယ်။ (Funding For Existing Schools and Building New Schools)
(၂) စာသင်ကျောင်းပုံစံနဲ့ ကိုက်ညီရမယ့် အဆင့်မီ ပညာရေးဆိုင်ရာ လိုအပ်တဲ့ ပစ္စည်းပစ္စယတွေ လိုအပ်မှု အခက်အခဲတွေ ရှိတယ်။ ဆိုလိုတာက အထက်တန်းပညာကို သင်ကြားတတ်မြောက်ခဲ့သူဟာ ထိုင်း (သို့) နိုင်ငံတကာ တက္ကသိုလ်ကျောင်းတွေကို ဝင်ခွင့်ရနိုင်ဖို့ GED စာမေးပွဲအဆင့်ကို ဖြေဆိုနိုင်ရမယ့်သူ ဖြစ်သင့်တယ်။ (Aid For School Facilities)
(၃) များပြားလာတဲ့ စာသင်ကျောင်းတွေမှာ တူညီတဲ့ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းတခု ဖြစ်ပေါ်လာရေးမှာလည်း အခက်အခဲတွေ ရှိနေတယ်။ (Have Same Curriculum)
(၄) အဆင့်မြင့်ပညာကို ဆက်လက်သင်ကြားခွင့် ရရှိနိုင်ရေးတွေမှာလည်း အခက်အခဲတွေ ရှိတယ်။ (Difficulties of Further Higher Studies)
(၅) ကျောင်းပြီးနောက် အလုပ်အကိုင် ရှာဖွေမှုမှာလည်း အခက်အခဲတွေ ရှိတယ်။ (Careers Job Search/ Job after Graduation)
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီအခက်အခဲ၊ အကျပ်အတည်းမျိုးစုံကို မဲဆောက်မြို့ မြန်မာပညာရေး တာဝန်ခံတွေအနေနဲ့ ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းပြီး ကျော်ဖြတ်သွားနိုင်ကြလိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ အနာဂတ်မှာ တိုင်းပြည်ခေါင်းဆောင်တွေ ဖြစ်လာကြမယ့် ကလေးငယ်တွေရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကို ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ဟာ နိုင်ငံသားတိုင်းရဲ့ တာဝန်ဖြစ်တာမို့ ပြည်ပရောက် မြန်မာနိုင်ငံသား အားလုံးကလည်း မိမိတို့ တတ်နိုင်သလောက် ဝိုင်းဝန်းပံ့ပိုးပေးကြပါစို့။
ကျမ ငယ်ငယ်တုန်းက ကျမနှင့်အစ်ကို့ ကို ဖေဖေက ကလေးစီးသောဗိုလ်အုန်းသီး ဂျစ်ကားလေးဝယ်ပေးခဲ့သည်။ ဂျစ်ကားက တကယ့် လူကြီးစီးဂျစ်ကားအတိုင်းပါပဲ။ အစိမ်းရောင်၊ ရှေ့လေကာမှန်နေရာမှာ မှန်မပါသော သံပြားဘောင် ခတ်ပြတင်းလေး။ လီဗာမပါ၊ ဘရိတ် မပါ၊ ခြေနင်းကွင်းနှစ်ခုသာ၊ ကွင်းတခုစီပေါ် ခြေတဖက်စီနင်းလျက် ရှေ့သို့ကားရွေ့အောင် မောင်းရသည်။ တယောက်တည်းစီးလျှင် ကိုယ့်ဟာကိုယ်နင်းရပြီး မောင်နှမနှစ်ယောက်စီးလျှင် အစ်ကိုကရှေ့ကထိုင် စတီရာရင်ကိုကိုင် ကားခြေနင်း ကိုနင်း၊ ကျမကနောက်ခန်း မှာထိုင်လိုက်သည်။
အိမ်ရှေ့လမ်းပေါ်မှာ စီးနင်းကစားရာကနေ တရက်တော့ ခြေရှည်ကာထိုကားလေးကို ရပ်ကွက်ကျော်ပြီး မောင်းကြသည်။ ကုန်းဆင်း တခုတွင် ကားလေးတိမ်းမှောက်သွားခဲ့ပြီး မောင်နှမနှစ်ယောက်လုံး လက်တွေခြေတွေ ပွန်းပဲ သွေးစို့သွားခဲ့သည်။ ကျမမှတ်မိ၏။ ကျမ ၏လက်ဖမိုးမှ လက်ဆစ်တွေသွေးစို့ပြီး ပွန်းပဲ့နေခဲ့သည်။ ရပ်ကွက်ကျော်ပြီး သွားရကောင်းလားဟု မေမေကဆူသေး၏။ ဖေဖေကတော့ ကားကဘရိတ်မပါသဖြင့် ကုန်းဆင်းတို့ဘာတို့တွင် တယောက်ကနောက် ကနေဆွဲပြီးထိန်းပေးရမည်ဟု မှာသည်။ လက်တွေနာကျဉ် သော်လည်း ကျမတို့မောင်နှမ စိတ်လှုပ်ရှားစွာရယ်မော နိုင်ခဲ့ကြသည်။ ကျမ ၏ ကလေးဘ၀သည် ဖေဖေနှင့် မေမေ၏ လွတ်လပ်ခွင့် ပေးမှုကြောင့် ရင်ခုန်စရာ စွန့်စားမှုအတိဖြင့် ကျေနပ်စရာဖြစ်ခဲ့ရသည်။
သူငယ်တန်းအောင်တော့ ပြောင်းရွေ့သွားရသည့် ကုန်းစောင်းရောက်တော့လည်း အလယ်တန်းကျောင်းတွင် တော်တော်ကျယ်ပြန့် သော ရေကန်ဟောင်းကြီးတခုရှိသည်။ မိုးတွင်းဆိုလျှင်ရေအတော်အတန် ပြည့်လျှံပြီး ကြာပင်တွေဗေဒါပင်တွေ ပေါက်ရောက်သည်။ ဆောင်းတွင်းကာလနှင့် နွေဦးကာလတို့တွင် ရေစပ်စပ်ကျန်ရစ်ခဲ့သော ထိုကန်ကြီး ပတ်လည်တွင် ငှက်ပျောပင်များ၊ ပုန်းညက်ပင် များ၊ စိန်ပန်ပင်များဖြင့် ဝေဆာမြိုင်ဆိုင်နေသည်။ ထိုကန်ကြီးသည် ကျမတို့ကလေးတသိုက်အတွက် စွန့်စားခန်းပြဇတ်များ ကပြရာ နေရာ တခု ဖြစ်ပါသည်။
စစ်တိုက်တမ်းကစား ကြသည့်အခါ ကျမတို့အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ ခွဲပြီးတိုက်ကြသည်။ ငှက်ပျောလက် ကျောရိုးများ၊ အုန်းလက်များ သစ်တို သစ်စ များကို သေနတ်လက်နက်အဖြစ် သုံးကြသည်။ မာလကာသီးစိမ်းသေးသေးများကို လက်ပစ်ဗုံးအဖြစ် သုံးကြသည်။ အများအားဖြင့် ကျမတို့ ကစားကြသော တိုက်ပွဲမှာ ဂျပန်နှင့် မြန်မာတပ်မတော်တိုက်ပွဲဖြစ်သည်။ တပ်မတော်သား လုပ်ချင်သူတွေ ကများပြီး ဂျပန်လုပ်ချင်သူက နည်းသဖြင့် အမြဲတမ်းမဲနှိုက်ပြီး ခွဲရသည်။ ဂျပန်က ရှုံးသူဖြစ်သည့်အပြင် နာမည်ဆိုးသူမဟုတ်လား။ ကျမတို့က သူရဲကောင်းသာဖြစ်ချင်သူတွေကိုး။
ကျမတို့ကုန်းစောင်းတွင် ရုပ်ရှင်ရုံဟူ၍ တခုတည်းသာရှိပြီး ထိုရုံတွင်ကျမတို့ ကြည့်ရသမျှ ဇာတ်ကားတွေမှာ စွန့်စားခန်းတွေသာ ဖြစ်၏။ ဥပမာ ဇော်လွင်နှင့် တင်တင်လှ ပါဝင်သော ဥဒါန်းမကြေ ဟူသည့်ဇာတ်ကား။ ကျမတို့သည် အများအားဖြင့် နေ့လည်ပိုင်း ကစားချိန်မုန့် စားဆင်းချိန် တို့တွင် ယောက်ျားလေးတွေနှင့် တန်းတူသေနတ်ပစ်တမ်း၊ တိုက်ပွဲတိုက်တမ်း ကစားခဲ့ကြသည်။ ရန်သူ ဂျပန် တွေရော မြန်မာမျိုးချစ် ဘီအိုင်အေ စစ်သားတွေရော ရေကန်ကြီးကို ပတ်ပြီး ပြေးကြ လွှားကြ၊ ပုန်းကြရသည်မှာ ရင်ခုန်စရာကောင်းသည်။
ထိုအကြောင်းကို ကျမတို့သမိုင်းသင်ခန်းစာ ထဲမှာလည်း လေ့လာခဲ့ကြသည်။ တခါတုန်းက ကျမတို့ကျောင်းပတ်ဝန်းကျင်တွင် တကယ် ပဲ ဂျပန်စစ်သားတွေ စခန်းချခဲ့ကြသည်။ သည်နေရာမှာ မြန်မာမျိုးချစ်တပ်မတော်သားတွေက ဂျပန်တွေကို တိုက်ဖို့ စည်းရုံးခဲ့ကြ ဆွေး နွေးခဲ့ကြသည်။ ရေကန်ကြီးသာမက ကျောင်းဘေးက ရေနံရည်ဝနေသော ညိုမှောင်သည့် ခြေတံရှည်သစ်သား အိမ်ကြီးကလည်း တော်လှန်ရေး ရာဇ၀င်နှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ အဲသည်မှာက ဂျပန်စစ်ဗိုလ်များ စတည်းချခဲ့ကြသည်ဟု ဆိုပါသည်။ ကုန်းစောင်းမြို့သည် ကျမကို ပင်လယ်နှင့်တူသော မိန်မများ ၀တ္ထုရေးဖြစ်ဖို့ အဓိကတွန်းအားပေးသော စွန့်စားသည့်မိန်မများ ရှင်သန်ကြီးပြင်းရာ ၀န်းကျင် ဖြစ်သည်။ ဗိုလ်တဲကြီးအနား ရေမြောင်းကြီး၏ဘေးမှာ တန်းစီနေသော လူတဖက်မက ပင်စည် ကြီးမားသည့် ကုက္ကိုလ်ပင်အိုကြီးများ၊ မန်ကျည်းပင်အိုကြီးများသည် ကျမတို့အား တကယ့်အဖြစ်ပုံပြင်များကို ပြောပြနေသည့် ကြွင်းကျန်ရစ်သော သမိုင်းဝင်အရာများဖြစ် သည်။
သို့သော် ကလေးဘ၀၏ အရိုင်းဆန်သောစွန့်စားမှုမှာ သဘာဝကပေးသည့် တောင်ကုန်းတွေ၊ သစ်တောတွေ ရေကန်တွေနှင့်သာ သက်ဆိုင်သည်ဟု မဆိုလိုပါ။ မြို့မှာလည်း စွန့်စားလိုသူ ကလေးငယ်များအတွက် ရှာတွေ့စရာနေရာတွေ အများကြီးရှိသည်။ ရေနံ ချောင်းမှာ ကလေးတွေကျောင်းတက်ကြသည့်အခါ ဘယ်မိဘကမှ ကျောင်းသွားကျောင်းပြန် လိုက်ပို့ပေးစရာမလို။ အဝေးပြေးကား တွေ မောင်းသောကားလမ်းမတလျှောက် လမ်းဘေးကပ်ပြီး ကလေးတွေကျောင်းသွားရတာဖြစ်ပေမဲ့ ဘာမှစိုးရိမ်တကြီး ပူပန်စရာ မလိုခဲ့။ မိုးသည်းထန်သည့် တနေ့ခင်းတုန်းကတော့ ကျောင်းအသွား ဖြတ်ရသည့်မြို့လယ်ချောင်းမှာ ရေတွေလျှံလို့ အနီးအနားက အိမ်တွေမျော၊ အိမ်တိုင်တွေကျွတ် ဖြစ်ကုန်လို့ ကလေးမိဘတွေ ကျောင်းသို့လိုက်ခေါ်ရသည်အထိ စိုးရိမ်စရာဖြစ်ခဲ့ဖူးသည်။ ထိုအ ဖြစ်မျိုးကတော် တော်ရှားပါသည်။ မိဘတို့သည် ကလေးတွေကို အတော်အတန်လွတ်လပ်စွာ သွားလာခွင့်၊ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ကို ကိုယ်ရှာဖွေစူးစမ်းခွင့် ပေးထားခဲ့သည်။
ထို့ကြောင့် ကျမတို့အိမ်နီးချင်းတွေကို ကျမတို့သိသည်။ အတန်းဖေါ်ကစားဖက် သူငယ်ချင်းမှာ မောင်နှမဘယ်နှယောက်ရှိမှန်း သိ သည်။ သူ့အမေက ဈေးထဲတွင် ငါးရောင်းသလား၊ စက်ချုပ်တာလား၊ နတ်ကတော်လုပ်တာလား၊ သူ့အဖေက ချမ်းသာသော ဆေး လိပ်ခုံပိုင်ရှင်လား အကုန်သိသည်။ ရေနံဆီမီးခွက်ထွန်းဖို့ ရေနံဆီသွားဝယ်တော့လည်း ညနေချမ်းမှောင်ရီပျိုးစအချိန်။ မြို့မတောင် ရပ်ကွက် စလင်းတန်းအထိ သွားဝယ်ဖို့ ကျမတယောက်တည်းကိုပဲ မေမေက ခိုင်းခဲ့တာပါပဲ။ ရေနံဆီရောင်းသော အိမ်ကနေ ပြန် လာရသည့်လမ်းသည် ကလေးတယောက်အတွက်တော့ လုံလောက်သည့်စွန့်စားမှု ဖြစ်သည်။ သည့်ထက်ပိုတာက စလင်းတန်းမှ ဈေး ဘက်သို့ပြန်အတက်မှာ ကြီးမားသောညောင်ပင်ကြီး၏ ပင်စည်တွင် ထိုးစိုက်ထားသော ထီးဖြူ ထီးနီလေးတွေ၊ တွဲလွဲချိတ် ထားသော မြင်းရုပ် ဆင်ရုပ် နတ်ရုပ်တွေ၊ ခေါစာပစ်သော ကြိမ်ခြင်း ၀ါးခြင်းအခွံတွေက နတ်ကိုးကွယ်ခြင်းနှင့် နတ်ကိုင်ခြင်း၊ ဖျားနာခြင်းဆိုသော ကြားဖူးနားဝဇာတ်လမ်းတွေကို လက်တွေ့ပြနေသလိုရှိသည်။ တခါမှ မမြင်ဖူးသော နတ်စိမ်းဆိုတာနှင့် ဆက်စပ် နေသော ထိုအရာများ သည် ကလေးတယောက် အတွက်ကြောက်စရာလည်း ကောင်းပြီး စိတ်ဝင်စားစရာလည်း ကောင်းသည်။
ကျမတို့၏ ကလေးဘ၀သည် တနည်းအားဖြင့် စိတ်လှုပ်ရှားစရာတွေနှင့် ကြွယ်ဝပြည်စုံခဲ့သည်။ ရေနံချောင်းမြို့၏ ရေနံငွေ့လွှမ်း နေသော ခြောက်သွေ့သည့် တောင်ကုန်းလမ်တွေမှာရေနံမြေသပိတ်၏ အငွေ့အသက်များကိုမြင်တွေ့ရှူရှိုက်ရသည်။ စတုတ္ထတန်းမှာ ရေနံမြေသပိတ်သမိုင်းကို ကျက်မှတ်စဉ်က သိခဲ့သည့်သခင် ဖိုးလှကြီးဆိုတာသည် တက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင်၏ ကမ္ဘာကုန်ကျယ်သရွေ့ ၀ယ်ဝတ္ထုကို ဖတ်ပြီးတော့တော်တော် ရုပ်လုံးကြွလာ၏။ ရေနံချောင်းမြို့မှာရှိသည့် သခင်ဖိုးလှကြီးလမ်းသည် ကျမတို့အိမ်နှင့် တော် တော်ဝေးသော် လည်းထိုလမ်းကို ကျမတို့ညီအမ စူးစမ်းရှာဖွေ လျှောက်လှမ်းကြသည်။ ဟောဒီလမ်းဟာ ရေနံမြေ သပိတ်တပ်သား တွေ လျှောက်လှမ်းခဲ့ တဲ့လမ်းပေါ့။ ကျမတို့ခြေဖ၀ါးအောက်က ကျောက်စရစ်လွှမ်းသော ကတ္တရာလမ်းဟောင်းသည် သမိုင်း ဖြစ်ရပ်မှန်တွေကို ကျမတို့အား ပုံပြင်အဖြစ် ပြောပြနေခဲ့သည်။
စွန့်စားခန်းပုံပြင် ၀တ္ထုတွေကို ကလေးတွေနှစ်သက်သည်။ ပတ်ဝန်ကျင်မှာ လူကြီးထိန်ကွပ်မှု စောင့်ကြည့်မှုမပါဘဲ ကိုယ်ချည်းပဲ လှုပ် ရှား ဆောင်ရွက်ရသည်ကို ကလေးတွေရင်ခုန်မက်မော၏။ နယ်က ကလေးတွေ၊ သဘာဝနှင့်ထိစပ်သော ကလေးတွေက သဘာ ၀တောအုပ်တွေဆီ မြစ်ကူးချောင်းခြား ကျွန်းတွေဆီ သွားချင်သည်။ လိပ်ပြာလေးတွေ ခူကောင်လေးတွေကို မြင်ချင်သည်။ ပုဇင်းတွေ ကို ဖမ်းချင်သည်။ ကျမ၏တူလေး တူမလေးတွေသည် မြို့ပြမှာနေတာမို့ သဘာဝတောအုပ်နှင့် ဝေးသည့်အခါ သူတို့ အတွက် စွန့် စားခန်းက တမျိုးတဖုံရှိ၏။ သူတို့ကို မိဘက၀ယ်ပေးသည့် စက်ဘီးနှစ်မျိုးရှိသည်။ တခုကဖိုက်ဘာခုံတွေနှင့် သုံးဘီး စက်ဘီး လှလှ လေး။ နောက်တ ခုက ခပ်မြင့်မြင့် နှစ်ဘီး စက်ဘီးလေး။ အစ်မက ထိုနှစ်ဘီးလေးဖြင့် ရပ်ကွက်ထဲမှာ လျှောက်နင်းရတာပျော်ရွှင်သည်။ မောင်လေးက သုံးဘီးစက်ဘီးလေးဖြင့် အိမ်ရှေ့လမ်းတလျှာက် ခေါက်တုန့်ခေါက်ပြန်နင်းရသည်ကို ပျော်ရွင်သည်။ ရာသီဥတုသာယာ သည့် ညနေ တိုင်းသူတို့စက်ဘီးလေး တွေဖြင့် ရက်ကွက်ကို ပတ်ကြသည်။ ပြန်လာသည့်အခါ သူတို့လမ်းမှာကြုံတွေ့ခဲ့ရသည့် ခွေးတွေ၊ ဘဲငန်းတွေ၊ အခြားလူတွေ အကြောင်း ပြောပြကြသည်။
"သားသားရှေ့မှာ ခွေးအကြီးကြီးက သားသားကိုစိုက်ကြည့်နေတာ၊ သားသားစက်ဘီးကို မရပ်ဘဲတအားနင်းပြီး သူ့ရှေ့ကနေ ပြေးလာ ခဲ့ရတာပေါ့ မောလိုက်တာ" ရင်တဆတ်ဆတ်ခုန်နေဆဲ မျက်နှာထားနှင့် ရေအိုးမှရေကို အမောတကော သောက်နေသည့် ကလေးငယ် သည် တက်ကြွရွှင်လန်းမှုအပြည့်။ နောက်တနေ့တွင် ထိုလမ်းသို့ ထပ်သွားရန်အဆင်သင့်။
သူတို့ကို စွန့်စားမှုအတွက်လွတ်လပ်ခွင့် ပေးသည့်အခါ ကလေးတွေ၏ အသက်အန္တရယ်ကို ကျမတို့ထည့်မစဉ်းစားသင့်ဘူးလား။ စဉ်းစားပေးသင့်တာပေါ့။ ကျမတို့ ခဏခဏကြံဖူးနေသည့် ကြေကွဲစရာ၊ ထိန့်လန့်စရာ ဇာတ်လမ်းမှန်တွေရှိသည်။ ကလေးတွေကို ဖမ်းဆီးခေါ်သွားပြီး လျှာကိုဖြတ်ပစ်တာတို့ သူတောင်းစားလုပ်ခိုင်းတာတို့က ဆိုတုန်းကတည်းက ဖြစ်ရပ်တွေ။ ယခုအခါ ကလေးငယ်တွေသည် အမျိုးမျိုးအမြတ်ထုတ်ခံနေရသည်။ သူတို့၏ လုပ်အားသာမက လိင်ဆက်ဆံခြင်းဖြင့်ပါ အမြတ်ထုတ်ခံရသည်။ ကံဆိုးမိုး မှောင်ကျပြီး အသတ်ခံရသည့် ကလေးတွေလည်းရှိခဲ့ကြ၏။
ထိုအထိတ်တလန့် ကြေကွဲစရာ ဇာတ်လမ်းမှန်တို့သည် ဟိုတုန်းကထက် ယခုခေတ်မှာအရေအတွက် ပိုလာသလား။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ ၁၉၉၉ ခုနှစ်တုန်းက ကလေးတွေကို ဖမ်းဆီးသွားသည့်အမှုပေါင်း ၁၁၅ ခုရှိခဲ့သည်၊ နောက်နှစ်တွေမှာလည်း ထိုအရေအ တွက်သည် သိသိသာသာတိုးလာသည်ဟု မဟုတ်ဘဲ ထိုအရေအတွက် ပတ်ဝန်ကျင်မှာတော့ ရှိနေတာပဲတဲ့။ ဆိုလိုတာက ကလေးတ ယောက်အတွက် ဖြစ်နိုင်ချေအန္တရာယ်သည် ပိုလာခြင်းလျော့လာခြင်းမရှိ။ လိုအပ်သည်ထက်ပိုပြီး ကာကွယ်ပေးထားသည့်တိုင်အောင် ကလေးတို့၏ အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ချေက လျော့နည်းမသွားခဲ့။ ကလေးတို့မှာသာ ပိုပိုသာသာ တင်းကျပ် ကာကွယ်ထားခံရသည့် အတွက် ကလေးဘ၀ စွန့်စားမှုတွေ ရင်ခုန်မှုတွေနှင့်ဝေးရသည်။
ယခုခေတ်မှ ကလေးတွေကိုအိမ်မှ ကျောင်းအထိလူကြီးက လိုက်ပို့ပေး၊ ထမင်းကို ကျောင်းအထိလိုက်ပြီးကျွေး၊ အပြန်တွင် လူကြီးက ကျောင်းအပြင်ကနေ စောင့်ကြို၊ အိမ်ပြန်။ ဒါက ကလေးကိုအန္တရာယ် အပေါင်းမှကြိုတင်ကာကွယ်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။ ကလေးကို ရွှေ ပေး မဆင်ရဟူသော ကာကွယ်တားမြစ်မှုသည် ထိုကြေကွဲစရာဇာတ်လမ်းတွေမှ ကာကွယ်ဖို့ဖြစ်သည်။ ရွှေသည် လူတို့အတွက် မက် မောစ ရာမို့ ရွှေကိုလိုချင်ပြီး ကလေးကို တခုခုအန္တရာယ်ပြုမှာ စိုးရိမ်လို့ဖြစ်သည်။ သို့သော်ရွှေမပါဘဲလည်း ကလေးတို့သည် အန္တ ရာယ်တော့ရှိ နေတာတော့အမှန်ပါ။ အန္တရာယ်ရှိလို့ထိန်ချုပ် ကာကွယ်ပေးတာက လမ်းမှန်းပါတယ်။ သို့သော် တဖက်မှာက ကလေး တို့အတွက်ကိုယ်တိုင် စူးစမ်းရှာဖွေထုတ်ဖော်မည့် မြေပုံတွေ၊ ရတနာသိုက်တွေ၊ ခရီးစဉ်သေးသေးလေးတွေ၊ လမ်းခရီးမှာတွေ့ရမည့် သူငယ်ချင်းသစ်တွေ ပျောက်ကွယ်ကုန်ရသည်။
ကလေးတို့သည် ပထ၀ီကို စိတ်ဝင်စားဖို့လိုအပ်၏။ ကိုယ့်ဒေသပတ်ဝန်ကျင်ကို ပြောပြသော ဒေသန္တရ ပထ၀ီထိုမှစပြီး ပထ၀ီကို စိတ်ပါ ၀င်စားကြသည်။ ကိုယ့်ဘေးမှာ တောင်ကုန်းရှိသလား၊ ကိုယ့်ဘေးမှာမြစ်ကြီးတစင်းရှိသလား၊ သဲသောင်တွေရှိသလား၊ မြစ်ထဲမှာ ငါးတွေ ရှိသလား၊ တံငါသည်တွေ ငါးဖမ်းကြသလား၊ ထိုမြစ်က ဘယ်မြို့ကနေလာပြီး ဘယ်မြို့ဆီသို့ ဆက်သွားသလဲ။ ကလေးတွေ သည်တိရစ္ဆာန်လေး တွေကိုစိတ်ဝင်စား၏။ ရန်ကုန်လိုမြို့ကြီးမှာ တိုက်ခန်းအလုံပိတ်၊ ခြံတံတိုင်းအလုံပိတ်ထဲတွင် နေထိုင်ကြရသော ကလေးတို့သည် တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်သို့ သွားလျင် ပျော်ရွှင်ကြသည်။ အသေးဆုံးပူးလေးတွေ၊ ကြက်တူရွေးလေး တွေ၊ ယုန်လေးတွေကအ စ ဆင်ကြီးတွေအထိ သူတို့ရင်ခုန်လို့မပြီးတော့ပေ။ တနေ့တနေ့ ကျောင်းသွားကျောင်းပြန် ကားပေါ်က မဆင်းရသော သူတို့လေးတွေ သည် တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်ထဲတွင် တောင်ကုန်းတွေလည်း တက်ကြွစွာ ပြေးတက်ပြေးဆင်း၏။ သူတို့အတွက်စွန့်စားခန်းသည် လူကြီးတွေ တော့ပါနေသေးတာမို့ ပုံပြင်တွေထဲကလို အပြည့်အ၀တော့မဟုတ်။ သို့သော် ကလေး တွေချည်း အုပ်စုဖွဲ့ကစားရ၊ စွန့်စားရသည့် အရသာကို မသိနိုင်သည့် ကလေးများအတွက် အဲသည်လောက်ကကိုပဲ တော်တော် ဟုတ်နေပါသည်။
စာဖတ်တတ်သည့် အရွယ်ရောက်လာတော့စာထဲကနေ စူးစမ်းရှာဖွေမှုနှင့် စွန့်စားမှုကိုဖတ်ပြီး နှစ်သိမ့်ကြရသည်။ ကဗျာတွေ ပုံပြင်တွေ မင်းသုဝဏ်၏ ကဗျာတွေက အသံလည်းချိုပြီး သဘာဝ ၀န်းကျင်ကိုလည်း ကလေးတို့ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်အောင် မိတ်ဆက် ပေးသည်။ တခါ တုန်က ပြင်သစ်ယဉ်ကျေးမှုဌာန အကြီးအကဲအရာရှိတယောက်၏ ညစာစားပွဲတွင် မိမိအတွက် ပထမဆုံး စွဲမက်ရသည့် ကလေးဘ၀ ကဗျာတွေအကြောင်း နိုင်ငံစုံ ပြောဖြစ်ကြသည့် အခါကျမရွတ်ပြခဲ့သည့် ကဗျာကလယ်စောင့်တဲ ကဗျာဖြစ်သည်။
မိုးထဲလေတဲတွင် ရေလွှမ်းနေသည့် ခြေတံရှည်ရှည် ချစ်စရာလယ်စောင့်တဲ လေးတခု၊ သူ့ဘေးက ရေထဲမှာကြာပွင့်တွေက အနီနှင့် အဖြူ။
ကလေးတယောက်ကို သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် မိတ်ဆက်ပေးလိုက်သည့်ကဗျာ။ ထိုကဗျာကိုဖတ်ပြီး ကလေး၏အတွေးထဲတွင် ပုံဖော် ကြည့်လိမ့်မည်။ ဘာများကွာခြားမလဲ။ ကျမတို့ငပုတော မြို့နယ်ကြာကွင်းကျေးရွာရှိ ကန်သုံးဆယ် ကြာကွင်း မူလတန်း ကျောင်းတွင် ကလေးများအတွက် ပြပွဲ၊ ပြိုင်ပွဲနှင့် စာဖတ်ပွဲများလုပ်ပေးစဉ်က မင်းသုဝဏ်၏ကဗျာနှစ်ပုဒ်ကို သရုပ်ဖော်ပန်းချီ ရေးဆွဲသည့်ပြိုင်ပွဲ ထည့် သွင်းခဲ့သည်။ ပထမရက်မှာ လယ်စောင့်တဲ၊ နောက်တရက်မှာ ၀င်္ကပါဖြစ်သည်။ အံ့သြစရာပင် ပထမတန်း၊ ဒုတိယတန်း၊ တတိယတန်း ကလေးတို့သည် ထိုကဗျာနှစ်ပုဒ်ကို တထိုင်တည်းနှင့်ပန်းချီရေးဆွဲ သရုပ်ဖော်ကြသည်။ ဒုတိယတပုဒ်က ပိုခက်သည်။
သူတို့ကို ရှင်းပြပေးရတာက ဒိုးယိုစီးတဲ့ ဆိုသည့်စကားပဲ ဖြစ်သည်။ နဒီဆိုတာမြစ်ဟု တော်တော်များများသိနေခဲ့ကြသည်။ ကံကော်ပင် ကိုမမြင်ဖူးဘူးဆိုသည့် ထိုမြစ်ဝကျွန်းပေါ်ကလေးတချို့အတွက် ကံကောင်းတာက သူတို့ကျောင်းမှာ သူတို့ပန်းချီရေးဆွဲ ဖို့ချထားသည့် ထိုင်ခုံတွေကို အရိပ်ပေးနေသည့် အပင်ကြီးသည် ကံကော်ပင်ဖြစ်နေခဲ့သည်။ ဟောဒါ ကံကော်ပင်ပေါ့ဟု သူတို့ ဆရာမက ပြောပြလို့ သူတို့သိရတော့ ရယ်မောကြပါသည်။ ကံကော်ပွင့်တွေကိုတော့ အ၀ါရောင်ဝတ်မှုံလေးတွေနှင့် ရေးဆွဲတတ် ကြ၏။ သူတို့ကို ပန်းချီဆု ပေးဖို့ ကျမတို့အုပ်စုတွင် ပန်ချီဆရာတယေက်မှ မပါ။ ဆုရွေးချယ်ဖို့ အတွက် အခွင့်မရှိ။ အတန်းလိုက် သူတို့ယှဉ်ပြိုင် စဉ်က ဆုရွေးချယ် ပေးခဲ့သည့် ပန်းချီဆရာ ကာတွန်းဆရာ ကိုဇော်မောင်၏ ဆုရွေးချယ်ခြင်းဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်မှုကို လိုက်နာပြီး ဆုပေးခဲ့ရပါသည်။
အဲလစ်စ်နှင့် အံဖွယ်ကမ္ဘာ စသည့်နိုင်ငံခြားမူရင်း စာအုပ်တွေကို လက်လှမ်းမမီနိုင်သေးသည့် ကလေးတို့အတွက် ကာတွန်း အောင်ရှိန်၏ ကလေးဇာတ်လိုက်တွေပါဝင်သည့် ကာတွန့်တွေရှိသည်။ အဲသည်မှာ တဆင့်တက်တော့ ဂရင်းညီနောင်၏ ပုံပြင်တွေ ရှိသည်။ ၀တ္ထုဖတ် နိုင်သည့်အရွယ်ရောက်တော့ ရွှေဥဒေါင်း၏ ၀တ္ထုတွေရှိသည်။ ဆယ်ကျော်သက်သို့ပြောင်းကာစ ကလေးတို့ မိန်းခလေးရော၊ ယောက်ျား လေးပါအလွန်နှစ်သက်သည်။ ယောက်ျားလေးတွေအဖို့တော့ အတိုင်းထက်အလွန်ပေါ့။ ဒဂုန်ရွှေမျှား၏ ဘာသာပြန်စွန့်စားခန်းဝတ္ထု တွေကိုလည်း ကလေးတွေနှစ်သက်ကြ၏။ ကျမဆယ်ကျော်သက် ကလေးတွေကိုတွေ့သည့်အခါ ဘာ စာအုပ်တွေကြိုက်လဲဟု မေးတိုင်း ရွှေဥဒေါင်းနှင့် ဒဂုန်ရွှေမျှား ပါဝင်တတ်သည်ကို သတိထားမိသည်။ ကျမကိုယ်တိုင် ရွှေဥဒေါင်း၏ ရှုပနန္ဒီ ကိုစွဲစွဲမက်မက် ဖတ်ခဲ့ရ သည်ကို သတိရမိပါသည်။ ကလေးတို့၏ စူးစမ်းရှာဖွေစွန့်စားချင်သည့် သဘာဝစိတ်ဆန္ဒကို ထို စာအုပ်များ၏ ရသက ဖြည့်စွမ်းပေး သည်။ စာအုပ်တို့သည် သူတို့အတွက်စိတ်ဖြင့် ခရီးနှင်စရာယာဉ်တွေဖြစ်သည်။
ကျမဘ၀တွင် ပထမဆုံးဖတ်ခဲ့ရသည့် ဓူဝံ၏မာလာဝတ္ထုတိုကို ကျမအခုချိန်အထိ မမေ့တော့ပါ။ အဲသည်အထဲကဖိုခနောက်ဆိုင် တိုင်း ပြည်သုံးခု ကြားကတောအုပ်ကြီးသည် တော်လှန်ရေးသမား သူရဲကောင်း ဗိုလ်နန္ဒ အခြေစိုက်ရာနယ်မြေဖြစ်သည်။ မတရားတာကို လက်ပိုက်ကြည့်မနေဘဲ အသက်နှင့်ရင်းပြီး ကူညီဖြေရှင်းပေးသော သူရဲကောင်းသည် ကျမအတွက် လေးစား အထင်ကြီးစရာပေါ့။ ည သန်းခေါင်တွင် ဘီလူးစားခံရတတ်လို့ မသွားရဲကြသည့် တောင်ခြေတခုဆီက လျှို့ဝှက်ချက်ကို ထုတ်ဖော် သည့် ထိုသူရဲကောင်း၏ ဆောင်ရွက်ချက်များ၊ သူဖမ်းဆီးရမည့် ဘုရင်မကို မဖမ်းဆီးရုံတွင်မကနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် စစ်အင်အားကြီးမားအောင်ပင် သူက ကူညီလိုက်သေးသည်။ ထိုဘုရင်မနှင့် သူရဲကောင်းကြားက ဖွင့်မပြောလဲ သိနေသည့် ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ နောက်ဆုံးသူ့ကတိကို ထိန်းချုပ် ပြီး သူ့အသက်ကို ဓားစာခံသူ့တပည့် နောက်လိုက် လူကိုးယောက်အသက်နှင့် လဲယူဖို့သာယာရွှေပြည် ဘုရင်ကြီးဆီသို့ တဦးတည်း တိတ်တဆိတ်ပြန်အသွား၊ ဘုရင်မကလဲ သူရဲကောင်းမရှိသည်ကို သိသည့်အခါ ထိုနိုင်ငံသို့ လိုက်သွားပြီး၊ သူ့ကိုယ်သူအပ်နှင်းလျက် ဗိုလ်နန္ဒအတွက် လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်တောင်းသည့်အချိန်၊ ထိုဇာတ်သိမ်းခန်း သည် ဇာတ်၏အထွဋ်အထိပ် ဖြစ်သည်။
သူတို့ဆီက ဟယ်ရီပေါ်တာ ၀တ္ထုတွေအရှိန်အဟုန်ဖြင့် လူကြိုက်များသည်မှာ ကလေးတို့ကိုယ်တိုင်ပါဝင် လှုပ်ရှားသည့် လျှို့ဝှက် ဆန်းကြယ်စွန့်စားမှု အခြေခံ ဇာတ်လမ်းများဖြစ်လို့ နေမှာပါ။ ကလေးတွေချည်းလူကြီး အကူအညီသိပ်မပါဘဲ အန္တရာယ်ဆိုး တွေနှင့်ကြုံ၊ ကလေးတို့၏ ကြံရည်ဖန်ရည် စွမ်းရည်တွေနှင့်ပဲ အဲသည်ကနေလွတ်မြောက်၊ ဘယ်လောက်ကျေနပ်အားရစရာ ကောင်းလိုက်ပါသလဲ။
အခုခေတ်မှာ အများအားဖြင့်တွေ့ရသည့် ကလေးတို့၏စွန့်စားမှုက ဂိမ်းတွေပဲ ဖြစ်သည်။ ဂိမ်းထဲမှာ သေနတ်ပစ်သည်။ ဂိမ်းထဲမှာဗုံး ဖောက်ခွဲသည်။ ဂိမ်းထဲမှာမြေလျှိုးမိုးပျံသည်။ ကျမတူအငယ်လေးတယောက် ဆော့သည့် ဂိမ်းမှာတော့ ဇာတ်လိုက်က သူ့လိုအရွယ် ကောင်လေး။ နွားခြံထဲမှာ နွားနို့ညှစ်တာလည်းပါ၏။ ကျမသဘောကျစွာ ပြုံးရယ်မိသည်။ သူ့ဘ၀မှာနွားကို သေသေချာချာကိုင်မ ကြည့်ဖူးတာကျမသိသည်။ နွားနို့ညှစ်ဖို့တော့ ဝေးလေစွ။ ဒါပေမယ့် ဂိမ်းထဲမှာနွားနို့ညှစ်သည်ဆိုတော့ ဒါလည်းတမျိုးတော့ စိတ်ဖြေရာ ရတာပေါ့လေ။ သို့သော် သူတို့တကယ်ကြုံတွေ့ရသည်က အလင်းရောင်တွေ ပုံရိပ်တွေပါ။ ဘယ်မှာလဲ နွား၊ ဘယ်မှာလဲ နွား၏ အမွှေးနု နုလေးတွေ၊ ဘယ်မှာလဲ နွားစာခွက်၏ ကောက်ရိုးရနံ၊ ဘယ်မှာလဲ နွားချေးနံ။
ကလေးတွေ သွားရင်းလာရင်း သစ်ပင်တွေကိုကြည့်ရမြင်ရသည် ဆိုလျှင်လည်းဒါက ကားမှန်ပြတင်းမှ တဆင့်မြင်ရသည့် မြင်ကွင်း တွေ၊ သစ်ရွက်စိမ်းစိမ်း ပန်းမွှေးမွှေးကို လက်ဖြင့်ထိတို့ကြည့်ရတာမဟုတ်။ လိပ်ပြာလေးတွေ ပုဇဉ်းလေးတွေ တီကောင်တွေကို လက် ဖြင့်ထိ ကိုင်ကြည့်ရတာမဟုတ်။ သူတို့လမ်းလျှောက်ရသည့် မြေက သူတို့အိမ်ရှေ့တိုက်ခန်းရှေ့က မြေသာလျှင်ဖြစ်သည်။ စက်ဘီးလေး သော်မှ စီးခွင့်မရှိ။ ကံကောင်းလို့ ခြံဝင်းကျယ်ကျယ် ရှိသူကတော့ စက်ဘီးစီးခွင့် ရှိတာပေါ့။ သာမန်ကျမတို့လို ကန်ထရိုက်တိုက်တွေမှာ နေရသည့်ကလေးတွေ ဘယ်နေရာသွားပြီး စက်ဘီးစီးမလဲ။ ဘောလုံးကန်သည့် ကွင်းမရှိ၊ ကြက်တောင် ရိုက်သည့် ကွင်းမရှိ၊ ပန်းခြံ တောင် ကျမတို့နားမှာမရှိတော့ပါဘူး။ စိမ်းလန်းသည့်နေရာ လိုအပ်သည်။ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှား ဆောင်ရွက်မှု လိုအပ်သည်။ စွန့်စားရင် ခုန်မှုကို ကလေးတွေသိဖိုလိုသည်။ ပျော်ရွှင်မှုသာမက နာကျင်မှုကိုလည်း ကလေးတွေ သိသင့်သည်ဟုဆိုလျှင် လက်ခံနိုင်ကြပါ့မလား။
လိုအပ်သည်ထက်ပိုပြီး အတင်းကာရောအကာအကွယ်တွေ ပေးခံနေရသည့် ကလေးတို့သည် ဘ၀အတွက် လိုအပ်သည့်သတ္တိတွေ ဘယ်ကရမလဲ၊ ဖြောင့်မှန်ပြီး အားနည်းသူကို ဖိနှိပ်ခံလူကို ကူညီကယ်တင်ပေးဖို့ အမှန်တရားအတွက် စွန့်စားလိုစိတ်တွေ၊ တွန်းအား တွေကိုဘယ်က ရနိုင်ပါ့မလဲ။ အနည်းဆုံးသူတို့၏ မျိုးဆက်အနာဂတ်ကလေးတွေ စွန့်စားမှု၏ အရသာကိုသိအောင် ပြောပြဖို့ ပုံပြင်တွေ ဖန်တီးပေးဖို့ အနုပညာကိုရော သူတို့ဘယ်က ရနိုင်လေမလဲ။